Golaha ammaanka ee QM oo muddo kordhin u sameeyay howlgalka midowga Africa . – Radio Muqdisho
Golaha Ammaanka ee QM ayaa muddo kordhin u sameeyay Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya illaa dhamaadka Bisha May 2019.
Golaha amniga ayaa sheegay in ay muhiim tahay howlaha nabad ilaalinta ee midowga afrika xilligaan ka hayaan soomaaliya.
U qaabbilsanaha cuna qabataynta QM ee Soomaaliya iyo Eretrea, khayrat Cumraof, ayaa kulanka kaga war-bixiyay socdaal uu dhawaan ku tegey Waddamo dhowra oo ku yaalla geeska Afrika.
Mr; khayrat Cumraof ayaa Golaha ugu war bixiyay booqashadii ugu danbaysay ee uu ku tagay Dalalaka Jabuuti, Kenya iyo Soomaaliya, isagoo intaas ku daray inaysan u suura gelin inay tagaan Dalka Eritrea.
Mudane Cumrafof ayaa soo dhaweeyay heshiiska nabadeed ee ay Dowladaha Itooboiya iyo Eritera ay ku gaaraeen Asmara 8-dii July ee Sanadkan, ayagoo soo gaba gabeeyay is fahan waagi ka dhexeeyay muddo 20 sano ah, soona celiyay xiriirka diblomaasiaydeed ee Labada Dal.
Wadahadalada Siiriya oo dib u bilowday